Thwebula Avira AntiVir 4.5 – Android – Vessoft
Avira – a software ukunikeza ekusebenzeni okuphephile idivayisi uhlelo. Avira kuthola emabhuloki software ayingozi ngokusebenzisa scan ngokuzenzekelayo izinhlelo ngesikhathi sokufakela yabo noma ukulungiswa kabusha izinguqulo ezintsha. Isofthiwe kunikeza ukuvikelwa imeyili kanye idatha yomuntu siqu in the memory idivayisi ngokumelene ukuqopha noma ukweba. Avira kwenza ukuchaza indawo kudivayisi elahlekile futhi unalo ikhono ukude ukuvimba noma susa idatha uma kunesidingo. Avira futhi uqinisekisa isivikelo izingcingo okungafunwa kanye SMS yingozi.
Ukuvikelwa izinsongo ehlukahlukene
Kuthola kususa malware
Vikela Ukwaziswa kusukela ukweba
Block Remote of the device elahlekile
Ukuvimba of izingcingo ezingenayo kanye SMS
English, Українська, Français, Español... Google Chrome 54.0.2840.85
English, Français, Español, Deutsch... Google Translate 5.5
Office Isofthiwe ukusebenza nge amafayela Microsoft Office futhi ukwazi ukuhlola amafayela PDF. Isofthiwe has a ukusebenza elikhulu kanye nenombolo ye izifanekiso.
English, Українська, Français, Español... Microsoft PowerPoint 16.0.7426.1015